गुल्मीमा आजै अर्का कोरोना आशंकितको मृ’त्यु – Jagaran Nepal
गुल्मीमा आजै अर्का कोरोना आशंकितको मृ’त्यु
आरडीटीमा पोजिटिभ रिपाेर्ट आएका गुल्मीका एक व्यक्तिको मृ’त्यु भएको छ । जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका– ४ का ४२ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा आइतबार दिउँसाे ३ बजे मृ’त्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले बताए ।
कोरोना फोकल पर्सन डा. थापाका अनुसार ज्वरो, रुघाखोकी लागेपछि उनी हिजो प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनको पीसीआर परीक्षणका लागि हिजो नै स्वाब प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवामा पठाइएको छ । उनको रिपोर्ट भने आइनसकेको उनले बताए ।
उनी भारतबाट आएपछि गाउँपालिकले तयार गरेको क्वारेन्टाइन बसिरहेका थिए । क्वारेन्टाइन बस्दा ज्वरो आएपछि उनलाई उपचारका लागि बुटवल ल्याइएको थियो । उनको शव लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ । आज मात्र गुल्मीमा कोरोना संक्रमित १ जनाको मृ’त्यु भएको थियो ।